> Resource> iPad> iPad Video Player: Watch Videos on iPad enweghị converting
Ọ bụrụ na ị kpọrọ converting videos ka MP4 ma ọ bụ M4V na iPad nwere ike igwu natively, ọ bụ n'ezie a oké echiche iji ihe iPad video ọkpụkpọ na-enye gị na-egwu ihe ọ video on iPad, gụnyere iPad unsupported video formats dị ka AVI, DviX, XviD, MKV , WMV wdg N'okpuru ebe a, m ga-ewebata atọ doable iPad video egwuregwu.
VLC bụ ihe kasị mma iPad video ọkpụkpọ na m na zutere na-ekiri kasị video format faịlụ na na iPad enweghị converting. N'ụzọ dị mwute, VLC e wepụrụ si AppStore site Apple, ruru ka ụdị ụfọdụ nke nghọtahie. Otú ọ dị, i nwere ike inwe VLC ọzọ site jailbreaking gị iPad.
FlexPlayer bụ a free iPad video ọkpụkpọ, nke na-akwado AVI, DivX, XviD, VOB wdg Otú ọ dị, ka nwere ndị ụfọdụ njọ. Ọ mkpọka ugboro ugboro. Mgbe ụfọdụ, (ụfọdụ ndị ọrụ mere mkpesa na) a na ngwa adịghị akwado ụfọdụ formats nke ọma dị ka FLV, na ihe na-ọbụna njọ mgbe ọ emelitere na ugbu a version.
YXPlayer akwado AVI, DivX, XviD, WMV, H.264 wdg ị chọrọ ịkwụ ụgwọ $ 5 maka ya. O yiri ka a oké ngwa n'ihi na ị na-egwu vidiyo na iPad, ma ọtụtụ n'ime reviews-ekwu ọ na eme nzuzu, na-ejere audio mgbe ụfọdụ unlistenable na-agba ọsọ na aa kacha nke 15 okpokolo agba kwa abụọ maka video.
N'ezie, ọ dịghị onye pụrụ n'ezie afọ ju ọrụ na nke ugbu a ahịa. N'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ, na ha achọghị iji tọghata videos maka iPad nanị n'ihi na ọ bụ na-ewe oge na ọ ga-belata mma. Ọma, ihe ma ọ bụrụ na e nwere ụzọ iji tọghata ọ bụla video na àjà ihe ọṅụṅụ-ngwa-ngwa ọsọ na ZERO àgwà ọnwụ? Ọ na-enyo e nwere. The software a na-akpọ Wondershare Video Ntụgharị (Video Ntụgharị maka Mac).
E wezụga converting vidiyo na 30X ngwa ngwa akakabarede ọsọ na ọ dịghị ọ bụla mma ọnwụ, a na ngwa mgbe niile na-arụ ọrụ nwayọọ nwayọọ, mfe, na n'ụzọ dị irè (tụnyere na atọ iPad video Player n'elu).
1 Download, wụnye na-agba ọsọ a video Ntụgharị
Ị nwere ike nweta ma Mac na Windows mbipute a ngwa site na ịpị njikọ n'okpuru. Mgbe ahụ, wụnye na-agba ya.
Cheta na: The nduzi n'okpuru bụ tumadi maka Windows ọrụ. N'ezie, Mac ọrụ 'ndu bụ n'ụzọ yiri ya. N'ihi na Mac ọrụ, ma ọ bụrụ na mkpa, ị pụkwara izo aka ebe a: ndị Guide nke Video Ntụgharị maka Mac.
2 Tinye videos a video Ntụgharị
Ime ya, na-aga "tọghata" tab> "Tinye Files" button na-agagharị na kọmputa gị na diski ike iji họrọ video faịlụ na ị chọrọ mbubata. Ukwu a ngwa-akwado ikpuru-dobe ime ihe na ogbe akakabarede, otú i nwere ike ịdọrọ otu ma ọ bụ ọtụtụ video faịlụ ka usoro ihe omume kama. Rịba ama na ndabara ọrụ ọnụ ọgụgụ bụ ise na kacha ọrụ ọnụ ọgụgụ bụ 10.
3 Họrọ otu kwesịrị ekwesị mmepụta usoro maka iPad
E nwere nile na-ewu ewu iPad ụdị a na ngwa si mmepụta format ndepụta, ndị dị otú ahụ dị ka ihe mbụ iPad, iPad 2, ọhụrụ iPad, iPad Air, iPad Obere. Na ị na-obi sie ịchọta ihe kachasị presetting n'ihi na gị iPad nlereanya ebe a.
See format na akara ngosi na "mmepụta Format" ebi ndụ, wee pịa ala-akụ button na-agagharị na niile ngwaọrụ ụdị. Dị họrọ gị onwe gị iPad nlereanya.
4 Play vidiyo na iPad
Pịa "tọghata" button na ala-nri n'akụkụ nke a Video Ntụgharị si interface iji tọghata video faịlụ maka playback na gị iPad. Mgbe akakabarede bụ n'elu, ị nwere ike nyefee mmepụta faịlụ ka ngwaọrụ site na iTunes mmekọrịta. Ị ga-ahụ gị iPad ike ịga nke ọma ịchọpụta media faịlụ na-egwu ha were were.